Galantamine Hydrobromide: Dawo Ku Fiican Cudurka Alzheimers - Phcoker
Kordhinta Galantamine Hydrobromide: Ma Tahay Dawo Ku Fiican Cudurka Alzheimers?
Guudmarka Galantamine Hydrobromide
Galantamine hydrobromide waa dawo dhakhtar qoro oo lagu daaweeyo waallida cudurka Alzheimers. Galantamine waxaa markii hore laga soosaaray warshadda barafka wadata ee Galantus spp. Kordhinta galantamine si kastaba ha noqotee waa alkaloid jaamacadeed oo kiimiko ahaan loo soo saaray.
In kasta oo sababaha cudurka Alzheimers aan si fiican loo fahmin, haddana waxaa la ogyahay in dadka qaba cudurka Alzheimers ay heerarkoodu hooseeyo kiimikada loo yaqaan 'acetylcholine' ee maskaxdooda. Acetylcholine waxay kuxirantahay shaqada garashada oo ay kujiraan xasuusta, barashada iyo wada xiriirka dadka kale. Hoos u dhaca kiimikadan (acetylcholine) ayaa lala xiriiriyay waallida cudurka Alzheimers.
Galantamine waxay ka faa'iideysataa bukaanada cudurka Alzheimers sababta oo ah farsamadeeda laba-geesoodka ah Waxay ku shaqeysaa iyada oo la kordhinayo heerarka acetylcholine laba siyaabood. Mid ayaa ah iyada oo laga hortagayo burburka acetylcholine kan kalena waa iyada oo loo marayo qaabeynta allosteric ee nicotinic acetylcholine receptors. Labadan geeddi-socod waxay gacan ka geystaan ​​kordhinta xaddiga enzyme, acetylcholine.
In kasta oo ay yareyn karto astaamaha cudurka Alzheimers, galantamine hydrobromide maahan daawo dhameystiran oo ku saabsan cudurka Alzheimer maadaama uusan saameyn ku yeelan sababta keentay cudurka.
Marka laga reebo faa'iidooyinka galantamine ee lagu daaweynayo astaamaha cudurka Alzheimers, galantamine waxaa lala xiriiriyay riyo qaali ah. Galantamine iyo riyo lucid waa urur ay soo sheegeen shaqsiyaadka isticmaala. Si loo gaaro galantamine-kan waxaa lagugu qaadanayaa xoogaa waqti inta u dhaxeysa hurdadaada tusaale ahaan kadib 30 daqiiqo oo hurdo ah. Qaar ka mid ah bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ayaa ku dhiirrigelin doona galantamine iyo faa'iidooyinka riyooyinka raaxada leh jadwalka kormeerka si looga fogaado waxyeelooyinka aan loo baahnayn.
Kordhinta Galantamine waxay ku dhacdaa qaabab kiniin ah, xalka afka iyo kaabsal la sii dheereeyey. Badanaa waxaa lagu qaataa cunno iyo biyo badan oo la cabbo si looga fogaado waxyeelooyinka aan loo baahnayn.
Dhibaatooyinka ay keento galantamine ee caadiga ah waxaa ka mid ah lallabbo, matag, madax xanuun, raaxo la'aan caloosha ama xanuun, murqaha oo daciifa, dawakhaad, lulmo, iyo shuban. Waxyeellooyinkaan galantamine hydrobromide badanaa waa kuwo fudud oo waxay dhacaan markii aad bilowdo qaadashada daawadan. Waqti ayey iska lumi karaan, hase yeeshe haddii aysan tagin la tasho dhakhtarkaaga. Waxa kale oo jira waxyeelooyin aan caadi ahayn laakiin halis ah oo dhici kara sida neefsashada oo dhib ku qabta, xabad xanuun, calool xanuun daran, kaadida oo ku adkaata, qalal, suuxdin iyo kuwa kale.
（1） Waa maxay Galantamine Hydrobromide?
Galantamine hydrobromide waa dawo dhakhtar qoro oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo khafiif ama dhexdhexaad dementia la xidhiidha cudurka Alzheimers. Cudurka Alzheimers waa cillad maskaxda ku dhacda oo badanaa burburisa xusuusta iyo awoodda fekerka, barashada, wada xiriirka iyo kartida lagu fuliyo howlaha maalinlaha ah.
Daawooyinka galantamine hydrobromide ma daaweyn karaan cudurka Alzheimer ee horumarsan laakiin waxaa loo isticmaali karaa daawooyinka kale ee Alzheimer.
Waxay ku dhacdaa saddex nooc oo waaweyn oo leh awood kala duwan. Noocyada 'galantamine' waa xalka afka, kiniinno iyo kaabsoolo la sii dheereeyey.
（2） Maxaa loo adeegsadaa? yaa u baahan inuu qaato dawadan?
Galantamine hydrobromide waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo astaamaha khafiifka ama dhexdhexaadka ah ee cudurka Alzheimers. Galantamine hydrobromide looma tilmaamin daaweynta cudurka Alzheimers sababtoo ah ma saameynayso habka hoos u dhaca cudurka.
Galantamine hydrobromide waxaa loo muujiyey inay isticmaalaan dadka qaba astaamo dhexdhexaad ama dhexdhexaad ah ee cudurka Alzheimers.
（3） Sidee ayuu u shaqeeyaa?
Galantamine wuxuu ku jiraa fasal dawooyin ah oo loo yaqaan 'acetylcholinesterase inhibitors'.
Galantamine wuxuu u shaqeeyaa si loo kordhiyo xaddiga enzyme, acetylcholine laba siyaabood. Marka hore waxay u shaqeysaa sidii loo celin lahaa oo la tartami lahaa acetylcholinesterase inhibitor taas oo ka hortageysa burburka acetylcholine ee maskaxda. Marka labaad, waxay sidoo kale kicisaa soo-dhoweynta nikotiin-maskaxda ee maskaxda si ay u sii daayaan acetylcholine badan.
Tani waxay kor u qaadeysaa xaddiga acetylcholine ee maskaxda, taas oo gacan ka geysan karta yareynta astaamaha la xiriira waallida.
Galantamine waxay kaa caawin kartaa kor u qaadida awooda fikirka iyo sameynta xusuusta sidoo kale hoos u dhigida luminta garashada garashada bukaanka cudurka Alzheimers.
Faa'iidooyinka Galantamine Hydrobromide ee Alzheimer's cudurka
Cudurka Alzheimer wuxuu keenaa unugyada maskaxda oo xumaada ugu dambeyntiina u dhinta. Sababta dhabta ah si fiican looma yaqaan laakiin cudurkan horusocodka ah wuxuu keenaa hoos u dhaca shaqada garashada sida xusuusta, barashada, fikirka iyo awooda lagu fuliyo howlaha maalinlaha ah. Waxa laga ogyahay bukaanka cudurka Alzheimers waa heerka hoose ee kiimikada loo yaqaan 'acetylcholine'.
Galantamine waxay u isticmaashaa daaweynta astaamaha waallida ee la xiriirta cudurka Alzheimers waxay ku dhacdaa qaabkeeda ficil ahaan. waxay kordhisaa heerka acetylcholine, enzyme muhiim u ah kobcinta garashada. Galantamine waxay u shaqeysaa sidii loo xakameyn lahaa oo loo tartami lahaa acetylcholinesterase inhibitor sidaas darteed waxay ka hortageysaa burburka acetylcholine. Waxay sidoo kale kicisaa soo-dhoweynta nikotiin-ka inay sii daayaan acetylcholine badan.
Faa'iidooyinka Kale ee Fursadda
(1) Magaca Antioxidant
Cadaadiska Oxidative waxaa loo yaqaanaa inuu sabab u yahay cuduro badan oo xumaada sida cudurka Parkinson, cudurka Alzheimers, cudurka macaanka, iyo kuwa kale. Waxay u dhacdaa si dabiici ah da'da laakiin marka ay jirto isku dheelitir la'aan u dhaxeysa xagjirnimada bilaashka ah iyo antioxidants, dhaawaca unugyada ayaa dhici kara.
Galantamine waxaa loo yaqaanaa inuu kala saaro noocyada oksijiinta falcelinta leh wuxuuna siiyaa difaac xagga neerfayaasha isagoo ka hortagaya in neerfaha waxyeelleeyaan walbahaarka oksida. Galantamine sidoo kale waxay hoos u dhigi kartaa soo-saarka xad-dhaafka ah ee noocyada oksijiinta fal-celinta iyadoo la kordhinayo heerka acetylcholine.
(2) Bakteeriyada dila jeermiga
Galantamine waxay soo bandhigtaa waxqabadka bakteeriyada.
Sidee loo qaataa daawadan?
aniga. Kahor intaadan qaadanin galantamine hydrobromide
Sida dawooyinka kale waa xikmad in la qaado taxaddarka lagama maarmaanka ah ka hor inta aan la qaadan galantamine hydrobromide.
U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad xasaasiyad ku leedahay galantamine ama wax ka mid ah maaddooyinka aan firfircooneyn.
Soo bandhig dhammaan daawooyinka aad hadda qaadatid oo ay ku jiraan dawooyinka laguu qoray, daawooyinka aad iska iibsato, daawooyinka geedaha ama wax soo saarka caafimaadka dabiiciga ah.
Waxaa lagugula talinayaa inaad u sheegto dhakhtarkaaga xaaladaha kale ee aad ka cabaneysid oo ay ka mid yihiin;
Xanuun daran oo caloosha ah,
Qalliin dhowaan la sameeyay gaar ahaan caloosha ama kaadi haysta.
Daryeelahaaga caafimaad waa in lagu wargeliyaa inaad uur leedahay ama aad qorsheyneyso inaad uur yeelato iyo inaad naas nuujiso. Haddii ay dhacdo inaad uur yeelatid intaad qaadanaysid dheecaanka galantamine, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan ula hadashaa dhakhtarkaaga.
Waa muhiim inaad u sheegto dhakhtarkaaga inaad qaadanayso galantamine ka hor qalliin kasta oo ay ku jiraan qalliinka ilkaha.
Galantamine hydrobromide saamaynta waxaa ka mid ah hurdo. Waa inaad markaa iska ilaalisaa wadista iyo mashiinka ku shaqeeya.
Qaadashada galantamine iyo aalkoladu waxay kordhin karaan saameynta galantamine hydrobromide ee lulmada.
ii. Qiyaasta lagu taliyay
(1) Asaasaqa uu sababayo cudurka loo yaqaan 'Alzheimer''s cudurka
Galantamine hydrobromide ee lagu daaweeyo cudurka Alzheimers wuxuu ku yimaadaa qaab guud iyo sidoo kale magacyada galantamine magacyadooda sida Razadyne horay loogu yaqaanay Reminyl.
Galantamine hydrobromide waxay ku dhacdaa seddex qaab oo leh awood kala duwan. Kiniinka afka waxaa lagu heli karaa 4 mg, 8 mg iyo 12 mg kiniin ah. Xalka afka waxaa lagu iibiyaa qiyaas dhan 4mg / ml inta badanna 100 ml dhalo. Kaabsol-sii-fidinta afka ah ayaa laga heli karaa 8 mg, 16 mg iyo 24 mg kiniin ah.
In kasta oo kaniiniga afka ah iyo xalka afka laga qaato laba jeer maalintii la qaato kaabsal-kordhinta afka ah ayaa la qaataa hal mar maalintii.
Bilaabida qiyaasta galantamine foomamka caadiga ah (kiniiniga afka iyo xalka afka) waa 4 mg laba jeer maalintii. Qiyaasta waa in lala qaato cuntadaada subixii iyo fiidkii.
Kaabsoolaha sii-dheereynta ah ee lagu taliyey ee ugu horreeya waa 8 mg maalintii oo la qaato cuntada subaxa. Kaabsol-sii-fidinta-dheer waa in si buuxda loo qaataa si ay ugu suurogasho in si tartiib ah loo sii daayo daawada maalintii oo dhan. Sidaa darteed, ha burburin ama ha ka jarin kaabsoolka.
Qiyaasta dayactirka ee kuxiran dulqaadka aad u leedahay galantamine qaabka caadiga ah waa in lagu qaataa 4 mg ama 6 mg laba jeer maalintii iyo kordhinta 4 mg 12 saacadood kasta ugu yaraan 4 usbuuc.
Kaabsoolka la sii dheereeyey waa in lagu hayaa 16-24 mg mg maalin kasta iyo in la kordhiyo 8 mg oo ah muddooyinka 4 toddobaad.
Qaar ka mid ah tixgelinta muhiimka ah markaad qaadaneyso galantamine
Had iyo jeer qaado galantamine cuntadaada iyo biyo badan. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka fogaato waxyeelada galantamine ee aan loo baahnayn.
Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato qiyaasta lagu taliyey ee galantamine qiyaastii isla waqtigaas maalin kasta. Haddii aad seegto qiyaas, u qaado sida ugu dhakhsaha badan ee aad u xasuusato haddii qiyaasta ku xigta aysan u dhowayn. Haddii kale ka bood qiyaasta oo ku sii wad jadwalkaaga caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad seegto qiyaastaada 3 maalmood oo isku xigta, wac dhakhtarkaaga oo kugula talin kara inaad ka bilowdo inta aad qaadanayso.
Iyada oo ku xidhan ujeedada loogu talagalay, dhakhtarkaagu wuxuu ku hagaajin karaa qiyaastaada iyadoo la raacayo iyada oo la kordhinayo ugu yaraan 4 toddobaad. Ha isku hagaajin qiyaastaada galantamine naftaada.
Haddii lagu siiyo kaabsol-sii-ballaadhin ah, hubi inaad liqdid gebi ahaanba adigoon calalin ama burburin. Tani waa sababta oo ah kiniinka loo beddelay in daawada si tartiib ah loogu sii daayo maalinta oo dhan.
Qoraalka xallinta afka, had iyo jeer raac talobixinta la siiyay oo kaliya ku dar daroogada cabitaan aan khamri ahayn kaas oo ay tahay in isla markiiba la qaato.
(2) Qiyaasta Dadka Waaweyn (da'da 18 sano iyo wixii ka weyn)
Kaabsolka la sii dheereeyey wuxuu leeyahay qiyaas bilow ah oo ah 8 mg oo la qaato hal jeer maalintii subaxdii. Bixiyahaaga daryeelka caafimaad ayaa laga yaabaa inuu wax ka beddelo qiyaastaada adoo ku kordhinaya 8 mg maalin kasta ka dib ugu yaraan 4 toddobaad. Wixii dayactir ah waa inaad qaadataa 16-24 mg maalintii sida dhakhtarkaagu kugula taliyo.
Qiyaasta sii-deynta degdegga ah, qiyaasta bilowga ah waa 4 mg oo la qaato laba jeer maalintii iyadoo laga bilaabo markaa 8 mg maalintii. Qiyaasta waxaa ku kordhin kara dhakhtarkaaga 4 mg maalin kasta ka dib ugu yaraan 4 toddobaad oo u dhexeysa.
(3) Qiyaasta Ilmaha (da'doodu tahay 0-17 sano)
Saamaynta Galantamine hydrobromide laguma barto carruurta (da'doodu tahay 0-17 sano), waa in markaa loo adeegsadaa oo keliya khabiirada caafimaadka.
iii. Maxaa la sameeyaa haddii xaddi xad dhaaf ah la qaato?
Haddii adiga ama bukaanada aad kormeeraysid aad uqaataan daawada galantamine, waa inaad isla markiiba wacdaa dhakhtarkaaga ama xarunta ka hortagga sunta. Waxaad sidoo kale ugu dhaqsaha badan u tagi kartaa qaybta gargaarka degdegga ah ee kuugu dhow.
Calaamadaha caanka ah ee laxiriira xad-dhaafka galantamine waa lallabbo daran, dhidid, calool xanuun daran oo neefsashada ah, muruqyada oo isbadala ama tabar daro, suuxdin, miyir beelid, garaaca wadnaha oo aan joogto ahayn iyo dhibaatada kaadida.
Dhakhtarkaaga ayaa ku siin kara daawooyin qaar sida atropine si aad uga laabato waxyeelada galantamine ee la xiriirta xad dhaafka.
Waa maxay waxyeelada la xiriirta isticmaalka Galantamine hydrobromide?
In kasta oo galantamine hydrobromide ay bixiso waxtar caafimaad dadka qaba cudurka Alzheimers, waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyeellooyin aan loo baahnayn oo galantamine ah. Waxaa jira waxyeelada galantamine taasi way dhici kartaa laakiin maahan in qof kastaa la kulmo.
Saameynaha ugu caansan ee aad kala kulmi karto isticmaalka galantamine waa;
Calaamadahaani waa wax caadi ah marka aad bilowdo qaadashada daawada 'galantamine' laakiin caadi ahaan waa kuwo khafiif ah oo laga yaabo inay ku baaba'aan isticmaalka daawada ee sii socota. Si kastaba ha noqotee, haddii ay sii socdaan ama noqdaan kuwo daran si aad u hubso inaad u wacdo dhakhtarkaaga si aad u hesho talo xirfadeed.
Dhibaatooyinka daran ee daran
Dadka qaar waxay la kulmi karaan waxyeelo daran. Dhibaatooyinkan xun waa wax aan caadi ahayn waana inaad wacdaa dhakhtarkaaga isla marka aad aragtoba.
Waxyeellooyinka halista ah waxaa ka mid ah:
Dareen-celinta xasaasiyadeed ee daran sida finanka maqaarka, cuncun iyo mararka qaarkood barar wejiga, cunaha ama carrabka ah.
astaamaha xannibaadda wadnaha (atrioventricular block) oo ay ku jiraan garaaca wadnaha oo gaabis ah, daal, wareer iyo miyir beelid
boogaha caloosha iyo dhiig baxa
Matag dhiigbax leh ama u muuqda sida qaxwada
Dhibaatada sanbabada ee dadka qaba neef ama cudurada kale ee sambabka
calool xanuun daran / calool xanuun
gubasho dareen ama xanuun inta lagu jiro kaadida
qaar ka mid ah suuqgeynta suuqgeynta 'galantamine' dhibaatooyinka soo raaca ee la soo sheegay waxaa ka mid ah;
qalal / gariir ama suuxdin
tinnitus (dhagaha oo laga yeerayo)
baarka wadnaha ama wadnaha oo dhameystiran
kor u qaadista enzyme beerka
finan maqaarka ah
finan cas ama guduud ah (erythema multiforme).
Tani waa liiska qaar badan oo aan kujirin dhammaan waxyeelooyinka galantamine. Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad wacdo dhakhtarkaaga caafimaadka haddii aad la kulanto wax saameyn ah oo aan caadi ahayn intaad qaadaneyso daroogadaan.
Daawooyin noocee ah ayaa la falgala galantamine hydrobromide?
Isdhexgalka daroogada waxaa loola jeedaa habka daroogooyinka qaar saameyn ugu yeeshaan kuwa kale. Isdhexgalkaani wuxuu saameeyaa sida daroogooyinka qaarkood u shaqeeyaan waxaana laga yaabaa inay waxtar yar yeeshaan ama xitaa ay dedejiyaan dhacdooyinka dhibaatooyinka soo raaca.
Waa la yaqaan isdhexgalka galantamine hydrobromide dawooyinka kale. Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu horeyba uga warqabo isdhexgalka daroogada qaarkood. Bixiyahaaga daryeel caafimaad ayaa awoodi doona inuu beddelo qaar ka mid ah qaddarkaaga si loo yareeyo fursadaha isdhexgalka daroogada ama laga yaabo inuu sidoo kale u beddelo daawooyinka gebi ahaanba. Waxaa laga yaabaa inay faa iido kuu leedahay inaad daawo ka hesho iyo gaar ahaan warqad dhakhtar kaa soo qoray isla ishaas sida farmashiyaha isku dhafka saxda ah.
Sidoo kale hayso liistada daawooyinka aad qaadanaysid una sheeg macluumaadkan bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kahor intaan dhakhtar qorin.
Qaar ka mid ah isdhexgalka galantamine hydrobromide waa;
Isdhexgalka lala yeesho niyadjabka
Daawooyinkan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo niyad-jabka waxaana laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan sida galantamine u shaqeeyo taasoo ka dhigeysa mid aan waxtar lahayn. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah amitriptyline, desipramine, nortriptyline iyo doxepin.
Isdhexgalka daawooyinka loo isticmaalo daaweynta xasaasiyadda
Daawooyinka xasaasiyadeed waxay saameyn ku yeelan karaan habka shaqada galantamine.
Daawooyinkaas waxaa ka mid ah chlorpheniramine, hydroxyzine iyo diphenhydramine.
Isdhexgalka daawooyinka jirrada dhaqdhaqaaqa
Daawooyinkani waxay saameyn ku yeeshaan waxqabadka galantamine hydrobromide.
Daawooyinkaan waxaa ka mid ah dimenhydrinate iyo meclizine.
Daawooyinka cudurka Alzheimers
Daawooyinka waxay u shaqeeyaan si la mid ah galantamine hydrobromide. Markii daawooyinkan la wada isticmaalo waxay kordhin karaan halista aad ku yeelan karto dhibaatooyinka soo raaca ee galantamine. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah 'donepezil' iyo rivastigmine.
Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah saameynta isku dhafan ayaa lagu gaari karaa iskudhafyada qaarkood.
Galantamine iyo memantine waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurka Alzheimers. Halka Galantamine uu yahay acetylcholinesterase inhibitor memantine uu yahay antagonist soo-qaade NMDA.
Markaad wada qaadatid galantamine iyo memantine, waxaad leedahay garaad garayn oo ka wanaagsan kan aad keligaa isticmaasho.
Si kastaba ha noqotee, daraasadihii hore qaarkood ma aysan gaarin horumar la taaban karo oo ku saabsan shaqada garashada markii galantamine iyo memantine la wada isticmaalay.
Isdhexgalka daawooyinka ee kaadiheysta firfircoonaanta
Daawooyinkani waxay saameyn ku yeeshaan sida galantamine u shaqeeyo. Haddii aad wada shaqeyn jirteen waxaa laga yaabaa inaadan ka guran galantamine. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah darifenacin, tolterodine, oxybutynin iyo trospium.
Daawooyinkaas waxaa ka mid ah dicyclomine, loperamide iyo hyoscyamine. Waxay saameyn ku yeelan karaan sida galantamine u shaqeeyo.
Galantamine iyo daroogada autism
Marka galantamine iyo daawooyinka otisamka sida risperidone la isla isticmaalo. Waxaa la soo sheegay inay wanaajineyso qaar ka mid ah astaamaha cudurka autism sida xanaaqa, caajiska, iyo ka bixitaanka bulshada
Xagee ka heli karnaa sheygan?
Galantamine hydrobromide waxaa laga heli karaa farmashiistaha xaafadaada ama dukaamada internetka. Macaamiisha galantamine iibso waxay ka imaaneysaa farmashiistaha la ogolaaday ee kuu qori kara daawada. Haddii aad tixgeliso galantamine ka soo iibso hay'ado sumcad leh oo u isticmaal oo keliya sida uu kuu qoray bixiyahaaga daryeelka caafimaad.
Galantamiin waa dawo fiican oo dhakhtar qoro oo lagu daaweeyo astaamaha waallida ee la xiriirta Alzheimer's cudur. Si kastaba ha noqotee daawo uma ahan cudurka maadaama uusan meesha ka saareynin geedi socodka aasaasiga ah ee cudurka Alzheimers.
Waa in loo adeegsadaa inay qayb ka tahay daaweynta cudurka Alzheimers iyo xeelado kale. Waa kaabis aad u fiican sababtoo ah qaabkeeda laba-geesoodka ah ee kordhinta acetylcholine ee maskaxda. Waxay bixisaa faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan ilaalinta neerfaha iyadoo laga hortagayo buufiska oksida.
Wilcock GK. Lilienfeld S. Gaens E. Waxtarka iyo badbaadada galantamine ee bukaanka qaba cudurka Alzheimer ee fudud ama dhexdhexaad ah. 2000; 321: 1445-1449.
Lilienfeld, S., & Parys, W. (2000). Galantamine: faa'iidooyin dheeraad ah oo loogu talagalay bukaanada qaba cudurka Alzheimers. Waallida iyo cilladaha garashada qofka, 11 Cuntada 1, 19–27. https://doi.org/10.1159/000051228.
Tsvetkova, D., Obreshkova, D., Zheleva-Dimitrova, D., & Saso, L. (2013). Waxqabadka Antioxidant ee galantamine iyo qaar ka mid ah waxyaabaha ka dhasha. Kiimikada dawada ee hadda jirta, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
Loy, C., & Schneider, L. (2006). Galantamine oo loogu talagalay cudurka Alzheimers iyo cillad maskaxeed oo fudud. Xogta Cochrane ee dib u eegista nidaamka, (1), CD001747. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001747.pub3.
Guudmarka 1.Galantamine Hydrobromide
3.Galantamine Hydrobromide faa iidooyinka cudurka Alzheimers
4.Faa'iidooyinka Kale ee Fursadda
5.Sidee loo qaataa daawadan?
6.Waa maxay waxyeelada laxiriirta isticmaalka Galantamine hydrobromide?
7.Daawo noocee ah ayaa la falgala galantamine hydrobromide?
8.Halkeen ka heli karnaa badeecadan?